समृद्धि र अधिकारका लागि विद्यालाई भोट | NepalDut
अञ्जु क्षेत्री पोखरा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यो उपनिर्वाचनमा नयाँ अनुभव बटुल्दै छ । इतिहासमै सबैभन्दा मजबुत संगठन र शक्तिशाली पार्टी बनेर नेकपा चुनावमा सहभागी भएको छ । आफैं सरकारको नेतृत्व गरेर चुनावमा होमिनु पनि नेकपाका लागि नयाँ अनुभव हो । मंसिर १४ गते हुने उपचुनावमा देशभरकै ध्यान कास्की २ मा छ । यो स्वभाविक पनि हो । किनकि, संघीय सरकारका लोकप्रिय मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ३ पटक जितेको क्षेत्रमा यो चुनाव हुँदै छ । देशभर एकमात्र संघीय सांसदका लागि हुने चुनावमा सहभागी सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि नजिता आफ्नो पक्षमा पार्न यथाशक्य कसरत गरिरहेका छन् । नेकपाले विद्या अधिकारी भट्टराईलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ । समग्र पोखरा उपत्यकाको समृद्धि र सिमान्तकृत, महिलाको अधिकारका लागि मतदाताले विद्यालाई नै जिताउनु आवश्यक छ । यसका केही कारण छन् ।
विद्या भट्टराई रवीन्द्रकी श्रीमती त हुन् नै, उनी यही कारणले मात्र मैदानमा आएकी होइनन् । विद्यार्थी आन्दोलनमा करिब २ दशक सक्रिय भएपछि उनी प्राध्यापक संगठन र महिला संगठनमा सक्रिय रहिन् । अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेकी उनी पद्यकन्या कलेजको स्ववियु सभापतिमा अनेरास्ववियुको तर्फबाट सभापतिको उम्मेदवार पनि बनेकी थिइन् । विद्यामा नेपाली समाज र नेपालीको समृद्धिको चाहनाको विशेष ज्ञान देखिन्छ । विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्ने उनी उम्मेदवार बन्नुअघि पनि समाजबारे पढाउँदै थिइन् । विद्यार्थी आन्दोलन र जनवर्गीय मोर्चाको लामो अनुभव लिएकी विद्या नेपाली समाज र नयाँ नेपालको सपना साकार पार्न चुनावी मैदानमा आएकी हुन् ।
समय बदलिएको छ तर विद्यार्थीका समस्या ज्युकात्यु छन् । सरकारी विश्वविद्यालयहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता भएका छन् । अरु विश्वविद्यालयमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच छैन । देशलाई आवश्यक पर्ने खालको जनशक्ति तयारी गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुको ठूलो भूमिका रहन्छ । विद्याले यसलाई निकै नजिकबाट बुझेकी छन् । महिला अधिकारका लागि नेपालका कम्युनिस्टहरुको ठूलो योगदान छ । नेकपाले महिलालाई राष्ट्रप्रमुख र सभामुख बनाइसकेको छ । महिला, मधेसी, पछडिएको वर्ग, जनजाति लगायतलाई आरक्षण दिएर राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने कार्यको नेतृत्व पनि कम्युनिस्टहरुले नै गरेका हुन् ।
विद्यार्थी आन्दोलन र जनवर्गीय मोर्चाको लामो अनुभव लिएकी विद्या नेपाली समाज र नयाँ नेपालको सपना साकार पार्न चुनावी मैदानमा आएकी छन् ।
विद्यालाई नेकपा कास्कीले सर्वसम्मत कास्की २ मा उम्मेदवार सिफारिस गरेपछि पार्टीमा एक खालको उत्साह सञ्चार भएको छ । नेकपाले चुनावी प्रचारप्रसार सकेको छ । तीनै तहका सरकारमा बसेर गरेका काम, इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गरेका योगदानबारे जनतालाई नेकपाले बुझाएको छ । अघिल्लो चुनावमा बाम गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका २ कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर आएका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिका चुनौतीको सामना र समृद्धिको सपना साकार पार्ने जिम्मेवारी जनताले नेकपालाई दिएका छन् । यो उपचुनावले यसलाई फेरि पुष्टि गर्ने नै छ ।
विद्याले मतदातासामु रवीन्द्रले सुरु गरेका योजना पूरा गर्ने, पोखरालाई समृद्धि र स्मार्ट सहरका रुपमा विकास गर्ने वाचा गरेकी छन् । नेकपाको देश विकासको रोडम्याप, इतिहासमा गरेको योगदान र समतामूलक समाज निर्माणका लागि नेकपाको विकल्प अहिले देखिँदैन । प्रचारप्रसारका क्रममा यहाँका मतदाताले पनि यही भनिरहेका छन् ।
रवीन्द्रको निधनपछि विद्या विधवा बनेकै हुन् । उनलाई एकल भन्नु जरुरी छैन । किनकि उनीको साथमा यत्रो ठूलो पार्टी छ, आफन्त छन्, शुभेच्छुक छन् । विद्यामाथि आँसुको राजनीति गरेको, काजकिरियासमेत नगर्नेले कसरी देश हाक्लान् भन्ने तुच्छ टिप्पणी विपक्षीहरुले गरेको सुनिएको छ ।
के आफूलाई लोकतन्त्रका असली हिमायती ठान्नेहरु महिला विधवा भएपछि जिउँदै मरुन् भन्ने चाहन्छन् ? होइन भने आँसुको राजनीति गरेको र परम्परागत रुपले कीरिया नगरेको भनी चुनावी एजेन्डा बनाउनुको अर्थ के हो ?
कसैले रहरले जीवनसाथी गुमाउँदैन, कोही रहरले मर्दैन । कोही दुर्घटनामा प्रियजन मरोस् भन्ने कामना गर्दैन । सृष्टिको यो तीतो सत्यमाथि पनि खेलवाड गरेर मानिसलाई लाञ्छना लगाउनेहरुको मूल्यांकन जनताले गरेका छन् । चुनावमा त्यसको परिणाम देखिनेछ । विद्याले भनेकै छिन्, ‘म आँसु लिएर मतदाताकहाँ जान्न । केही बाँकी रहेको आँसु पनि सकेर जान्छु ।’ श्रीमान्को निधनपछि आधा जीवन सकिएको ठान्ने नेपालीको पुरातन परम्परा हो । श्रीमान्को लाससँगै सती जानुपर्ने नियम नेपालबाट हटेको धेरै भएको छैन ।
के आफूलाई लोकतन्त्रका असली हिमायती ठान्नेहरु महिला विधवा भएपछि जिउँदै मरुन् भन्ने चाहन्छन् ? होइन भने आँसुको राजनीति गरेको र परम्परागत रुपले किरिया नगरेको भनी चुनावी एजेन्डा बनाउनुको अर्थ के हो ? बोक्सीको आरोपमा जिउँदै जलाइएका, हिंसामा परेकामध्ये अधिकांश एकल महिला छन्, तथ्यहरुले यही भन्छन् । कमजोर, गरिब, निमुखा एकल महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाउने, पोइ टोकुवाइको आरोप लगाउनेहरु आफ्नै परिवारमा यस्तो विपत्ति आए के गर्दा हुन् ? समय निकै अघि बढेको छ ।
विकास, समृद्धि र विश्वचेतनाले महिला र पुरुष समान भन्ने धारणा विश्वव्यापी बन्दै गएको छ । स्मार्ट पोखराको सपना साकार पार्न, महिला, सिमान्तकृतका एजेन्डालाई स्थापित गर्न र समाजवादसम्मको यात्रामा देशलाई लैजान विद्यालाई यो क्षेत्रका जनताले जिताउने नै छन् । मौन अवधि सुरु भएपछि चुनावअघिका अनेक बहस करिब सकिएका छन् । अब मतदान र परिणामको प्रतीक्षा छ ।